Nezvedu - Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd.
Kuzvivandudza Kwayo Shongwe Crane
Yakakura Structural Zvikamu
Excavator mamiriro echikamu
Loader zvikamu zvesimba
Kusimudza tambo kireni
Yakasimbiswa muna 2002, Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd (XJCM). ibasa rekugovana pamwe nemari yekudyara yeRMB16 mamirioni. Kambani yedu inovhara nzvimbo yemakumi mashanu ezviuru zvemamirimita, makumi matatu neshanu ari emashopu. Isu takashongedzerwa nezvinopfuura 260 zvigadzirwa-zvitsva uye zvemberi zvivakwa. Isu tinoshanda mukugadzira zvivakwa zvakakura zvemuchina wekuvaka uye yedu yegore yekugona kugona ndeye zviuru makumi maviri metric matani. Yepamusoro-tekinoroji michina yekuverenga manhamba, kuwelda, kugadzira uye kupisa kurapwa zvinoshandiswa mukuita kwekugadzira kwedu. XJCM main zvigadzirwa zvakashata terrain crane, rori crane, kuzvipira -kucheresa shongwe kondo, multifunctional pipelayer uye akawanda ekuvaka michina zvikamu. Ivo zvechokwadi eyakajairika mhando.
XJCM ndeimwe yemakwikwi uye yakanakisa mutengesi weXCMG. Isu tinopa mabhakiti ekuchera, mabhaketi ekuregedzera, mawoko edombo, zvisungo, mabhureki, mafuremu epamberi, mafuremu ekumashure, mapini roll uye zvimwe zvigadzirwa zvine chekuita neXCMG, CAT, FOTON, LIUGONG, HELI forklift, YUTONG uye mamwe makambani mazhinji akakurumbira emuchina muChina. Yedu RT akateedzana cranes, QY akateedzana marori crane uye JFYT akateedzana shongwe makira anotumirwa kuNorth America. South America, Africa, Middle East, West Asia, Southeast Asia uye nedzimwe nyika dzinopfuura makumi matatu nematunhu.
Mutengi wedu: • Madhaimani Emapurojekiti Malta • AGRO ACCESSORIES (NZ) LIMITED • Avsrya Kuvaka • BALBANS GROUP & INVESTMENT LTD. SWISS GRADE CONSULT LIMITED • SAMAD RESOURCES LTD. • Tayo Propert Mamagements Ltd.
Imishini yekuvaka bhizinesi
Nesimba rakasimba uye hwakakwana hutongi hwehutongi chimiro, iyo kambani yakabudirira kunyorwa muJiangsu Equity Exchange Center uye ikave nhengo yemunharaunda yekutengesa equity musika. Pakati pavo, DGY akateedzana akawanda-anoshanda mupombi uye Yega-kurodha yakachena mota yakunda yepasirese yekugadzira patents. JFYT akateedzana nekukurumidza inofamba yega-yekumisikidza yakangwara shongwe kireni ndiyo yekutanga chigadzirwa muChina. Iyo "RT yakateedzera-nzira crane" yakazvimiririra yakatsvakurudzwa uye kuvandudzwa nekambani yakazivikanwa se "chigadzirwa chepamusoro-soro" neSainzi neTekinoroji Dhipatimendi rePurovhinzi yeJiangsu uye yakanyorwa mu "National Torch Plan Industrialization Demonstration Project" nebazi. yeSainzi neTekinoroji.
• Kubva payakavambwa, kambani yakateya mari mukuyedza michina uye michina yekuyedza, uye iine sangano rekugadzira pamwe nekugadzirisa huwandu hwemaseti anopfuura zviuru zvitatu emishini yekuvaka.
2500T CNC vachikotama muchina
Mashini makuru anofinha
• Mimwe michina yakadai semidziyo yekucheka laser, muchina wakanaka wekucheka plasma, pasi rinofinha uye wekugaya muchina
Cnc Laser kucheka muchina
• Matatu-anoratidzira detector, welding flaw detector, nezvimwewo, zvese zviri zvishandiso zvemberi muChina.
Gantry otomatiki Welding
Iyo kambani ine yakakwana yehunyanzvi mhando vimbiso manejimendi sisitimu, uye yakapasa iyo ISO9001 yemhando manejimendi sisitimu, ISO18001 yepamabasa yehutano uye chengetedzo manejimendi system chitupa uye CE chitupa, GOST certification. Parizvino, kambani ine makumi mashanu ematanhatu matekinoroji, kusanganisira gumi nematanhatu ekugadzira patent uye makumi mana nematanhatu ekushandisa pateni.
Iyo kambani inosanganisa tekinoroji, capital, matarenda, zvivakwa zvemukati, uye inotora iyo indasitiri sebasa, kutendeseka, mhando semudzi, uye inodzosera nzanga neepamusoro-mhando michina michina zvigadzirwa!
Kero:NO.1 Dapeng Industrial Park, Tongshan Dunhu, Xuzhou, Jiangsu, China